Iziko lobushushu lonyango lobushushu Abavelisi kunye nabaXhasi | I-China Industrial Furnace Heat Treatment Factory
Isifudumezi segraphite luhlobo lokufudumeza umzimba kwiziko lobushushu eliphezulu. Ubushushu bemveliso bunokuphakanyiswa ngokukhawuleza ngokuvula amandla
Grafayithi ukufudumeza ipleyiti
Igrafayithi ineempawu ezintle zokumelana nobushushu obuphezulu kunye nokuqhutywa kobushushu, kwaye ngumthombo wobushushu obuhle. Iphepha legraphite lifudunyezwe ngokuqhutywa, yeyona ndlela iphambili yokufudumeza ubushushu besithando somlilo.
Grafayithi ukufudumeza intonga
Kukho iintlobo ezingaphezu kwama-20 zamalungu e-graphite kwi-CZ ye-thermal, eneempawu eziphathekayo kunye ne-teknoloji yokucubungula inefuthe elikhulu kumgangatho wekristal enye. Sisebenzisa izixhobo ezikumgangatho ophezulu zegrafite ngamandla aphezulu, ukusetyenziswa okuncinci, isakhiwo esihle, iipropathi ezifanayo zomzimba kunye neekhemikhali ukuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zentsimi yobushushu kunye neenxalenye, ke iimveliso zinomgangatho ophezulu.
Grafayithi iinxalenye eziko ezincamathelayo
Kwinkqubo yokuveliswa kwesithando somlilo, izinto zegrafayithi ziphumelele kwimarike yesicelo ebanzi ngenxa yeempawu zayo ezizodwa. Izahlulo zegraphite kwiziko elincamathelayo zibandakanya: ukufudumeza ubushushu bekhabhoni ezinye iimveliso.
I-Polyacrylonitrile esekwe kwiGrafite ifayibha yoluvo
Igrafayithi yaziva inokwahlulwa ibe yigrafayithi esekwe kwi-asphalt, i-polyacrylonitrile-based (PAN-based) yegraphite yaziva kunye ne-viscose-based grafite yaziva ngenxa yokhetho olwahlukileyo lweemvakalelo zokuqala. Ezona zinto ziphambili zisetyenziswayo xa kusenziwa igrafite Ingasetyenziselwa njengezixhobo zokucoca ulwelo olunobunyulu obunobungozi obunokubangela i-reagent kwimveliso yamachiza.
Ikhabhoni yefibre edityanisiweyo
Ikhabhoni yefibre edityanisiweyo evakalayo iqhutywa yitekhnoloji ekhethekileyo yokuqiniswa kunye nokuseta, kunye nonyango lokuhlanjululwa kobushushu obuphezulu ngefoyile yegraphite, isiseko sekhabhoni esine-polyacrylonitrile kunye ne-polyacrylonitrile isiseko sekhabhoni yelaphu njengezinto ezingafunekiyo. Ukuxhathisa kwayo okunganyangekiyo, ukuxhathisa ukothuka kwe-thermal, ukumelana nokuhamba komoya, ukusebenza kwe-thermal kulunge kakhulu, ke isetyenziswa ikakhulu kumatshini wokucoca isinyithi.
Ilaphu lekhabhoni lisontiwe kwaye lalukiwe ngesiseko sekhabhoni (PAN) sefayibha, esahlulwe sasishushu ngelaphu lekhabhoni, ilaphu lekhabhoni yokufudumeza thermal, kwaye yomeleza kwaye yaqinisa ilaphu lekhabhoni. Inokuthathwa njengesixhobo esomeleza izinto zekhabhoni / zekhabhoni.
Unyango lobushushu kwiziko mveliso
Iziko lezemoto luhlobo lwezixhobo ezisebenzisa ubushushu obuguqulwe ngamandla ombane ukufudumeza izinto okanye izixhobo zomsebenzi kwimveliso zorhwebo. Isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso kunye nokuvavanywa kweseramics, isinyithi, i-elektroniki, iglasi, ishishini leekhemikhali, oomatshini, i-refractory, uphuhliso lwezinto ezintsha, izinto ezizodwa, izinto zokwakha, iiyunivesithi kunye namaziko ophando.
Isilinda esinzima sokugcina ubushushu
Kwimveliso ye-photovoltaic, iimveliso ezikhethekileyo zegraphite ezisetyenziswa kwimveliso ye-polysilicon zibandakanya: ii-reactors, amakhadi e-polycrystalline, abasasazi begesi, izinto zokufudumeza, amakhaka obushushu kunye neetyhubhu zokugcina ubushushu.